Sheegasho in laga Bixin doono Debaajiga Gobolka ee loogu talo galay Masaafooyinka Fudud ee Madaarka Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSheegasho in lagu siinayo marxaladaha aan furneyn ee garoonka diyaaradaha Istanbul
07 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
sheegasho in laga siinayo dawladda gobolka ilaa marxaladaha aan degganeyn ee garoonka diyaaradaha Istanbul
Kaliya mid ka mid ah afarta marxaladood ee garoonka diyaaradaha Istanbul, oo shaqeynaya, ayaa la bixin doonaa sababo la xiriira dammaanad qaadayaal rakaab oo ka mid ah marxaladaha aan furneyn.
SözcüSida laga soo xigtay Basak Kaya, CHP Kocaeli kuxigeenka Haydar Akar, shirkaddu ma furi doonto heerarka kale ee lacagta dammaanadda rakaabka, ayuu yiri. Akar wuxuu cadeeyay in Airport-ka Istanbul lagu khaarijiyay qaab ku-wareejin-qaab wareejin ah wuxuuna xasuusiyay in garoonka lagu wareejiyay 25 bilyan 22 milyan Euro oo lagu daray VAT 152 sano oo shaqeynayey. Akar wuxuu yidhi;
Devlet Dowladdu waxay bixisay dammaanad boqolkiiba 61 ah ee garoonka cusub. Cashuur dhaaf, VAT, cashuur dhaaf ayaa sidoo kale la bixiyay. Lacagta rakaabka ee la dammaanad qaadayo ee dhamaan garoomada diyaaradaha BOT waa 15 Euro oo khadadka caalamiga ah iyo 20 Euro halkaan. 3-2 Euro madaarada gudaha iyo 5 Euro halkaan. Madaarka wuxuu ka kooban yahay 4 marxaladood. Marxaladaha 3 iyo 4 ayaa la sameyn doonaa iyada oo kuxiran xaalada 1 iyo 2. Marka ma cada haddii ay weli qabatay. Haddii ciriiri dhaco, shirkadda waxay dhisi doontaa marxalado 3 iyo 4, haddii kalese ma ahan. ”
Hawl wadeenku wuu helayaa lacagtiisa
Haydar Akar wuxuu carrabka ku adkeeyay in tirada rakaabka ee dammaanadda leh la dhisi doono iyadoo la tixgalinayo in marxaladda 3-aad iyo 4-aad la dhisi doono. Marxaladda koowaad waxay yeelan doontaa 70 milyan oo rakaab ah. Marxaladda labaad kadib, awooda rakaabka ayaa noqon doonta 2 milyan. Haddii 90 milyan ay ku dhegan tahay, marxaladda saddexaad ayaa la dhisi doonaa oo awoodda 90 milyan ayaa iman doonta. Haddii Marxaladda 3aad ay xirnaato, Marxaladda 20 ayaa la dhisi doonaa. Xitaa haddii aan la samayn, shirkadaha hawlgala waxay helayaan lacagtooda. Iyada oo ay ugu wacan tahay heshiisyada ku saabsan tirada gawaarida ee dammaanad qaadaya iyo is-weydaarsiga aad bixisaan, dawladda ma bixin karto lacag loogu talagalay wadayaasha. Waxaad u dhiseysaa tunnel isku mid ah. Waxaan isla aragnay isla sawirka dhulka iyo hawada. ”
Ku-xigeenka Wasiirka Gaadiidka, shabakadaha gaadiidka, waqtiga ku habboon, 10-kii sano ee la soo dhaafay yapılan
By tareenka u dhexeeya Germany iyo Turkey TR Box Gaadiidka oo bilawday
Ogeysiiska Qandaraaska: Shirkadda Susta Safes waa la iibsan doonaa (TUDEMSAS)
Sapanca Cunto La Qaadsiiyo Kharashka Lacagta la Sameeyo
Magdhawga Shaqaalaha Kormeerka Maaddooyinka Halista ah
Garoomada diyaaradaha ee BOT